My World: ၃. မုန်တိုင်းလေပွေ မွှေ့လေသော်
၃. မုန်တိုင်းလေပွေ မွှေ့လေသော်
Posted by PhyoPhyo at Sunday, February 27, 2011 Labels: ဖိုးပလံ နှင့် ထူးထွေဆန်းရာ သည်ကမ္ဘာ
ခခ တို့ ဦးလေး ဦးမိုးကြီးက ရွှေရောင်နီလွင်ပြင်မှာနေကြတယ်၊ ဦးမိုးကြီးက လယ်သမားကြီးပါ၊ ဦးမိုးကြီးရဲ့မိန်းမအန်တီနုနု ကတော့ လယ်သမားကြီးတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြရတာပဲ၊ ဦးမိုးကြီးကို ကူညီတယ်၊ ကျွဲတွေနွားတွေအတွက် အစားအစာ ပြင်ဆင်ပေးမယ်၊ အစားအစာကျွေးတယ်၊ နှစ်ဦးသား တက်ညီလက်ညီအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်၊ ဦးမိုးကြီးက ခခ မေမေ မသီတာရဲ့ အကိုကြီး၊ ဒီ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ခခ က တခြားနေရာတွေကို ပျော်ပွဲစားမသွားချင်ပါဘူးလို့ဆိုတယ်၊ ဦးမိုးကြီးဆီ ခဏလောက်သွားနေချင်တယ်တဲ့၊ ဦးမိုးကြီးက ချောင်ချောင်လည်လည်သိပ်မရှိကြဘူး၊ ဦးမိုးကြီးတို့ကလည်း ခခ ကိုတွေ့ချင်မြင်ချင်လှတယ်၊ ခခ မေမေနဲ့ ဖေဖေက ချမ်းချမ်းသာသာမရှိလို့ ခခကိုမလွှတ်ချင်ကြဘူးဆိုတာမျိုး မထင်စေချင်ကြဘူး၊ ခခကလည်း သိပ်ကိုသွားချင်နေလေတော့ နောက်ဆုံး ခခ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဦးမိုးကြီးတို့ဆီအလည်သွားနေဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။
ခခ က အင်မတန်စပ်စပ်စုစုရှိသူလေးဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ် အတွေ့အကြုံအသစ်မှာ ခုန်ပေါက်မြူးတူးနေတာပါပဲ၊ ခခ ရောက်သွားတော့ ဦးမိုးကြီးတို့ အိမ်လေးရယ် လယ်ကွက်တွေရယ် တွေ့ရပါပြီ၊ ဦးမိုးကြီးက ပြောပြရှာတယ်၊ သူတို့ရဲ့သစ်လုံးအိမ်လေးအတွက် သစ်တွေကို မိုင်းပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာကနေ လှည်းကြီးနဲ့ တိုက်ပြီးသယ်ယူခဲ့တယ်တဲ့၊ အိမ်လေးက နံရံလေးဘက်ရှိတယ်၊ ကြမ်းပြင်ရှိမယ်၊ အိမ်ခေါင်မိုးရှိမယ်၊ အခန်းက အားလုံးပေါင်းမှ အဲဒီတစ်ခန်းထဲပဲရှိနေပါတယ်၊
မီးဖိုထားတဲ့နံရံထောင့်တွေမှာ ကြပ်ခိုးမည်းမည်းတွေ ဘေးဘက်၊ အပေါ်ဘက်မည်းသိပ်နေကြပြီ၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေထားဖို့ ဗီရိုလေးတစ်လုံးရှိတယ်၊ စားပွဲတစ်ခု၊ ထိုင်ခုံ သုံး လေးလုံးလောက်ရယ်၊ အိပ်ရာတွေရယ်၊ အခန်းတစ်ခန်းအိမ်လေးရဲ့ အဆာပလာတွေက အဲဒါအကုန်ပဲ၊ ဦးမိုးကြီးနဲ့ နုနုတို့ရဲ့ အိပ်ရာကြီးက ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ၊ ခခ အတွက် တခြားထောင့်တစ်ထောင့်မှာ ခပ်သေးသေးအိပ်ရာလေးပြင်ပေးကြတယ်၊ အဲဒီအိမ်ခန်းလေးမှာ ထပ်ခိုးလည်းရှိမနေဘူး၊ မြေတိုက်ခန်းလည်းမရှိပါဘူး၊ မြေကြီးထဲမှာ တူးထားတဲ့ တွင်းလေးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်၊ သူတို့ကတော့ အဲဒီတွင်းပိစိလေးကို ဆိုင်ကလုံးမြေတိုက်ခန်းလို့ ခေါ်ကြတယ်၊ မုန်တိုင်းလေပွေကြီးတွေသောင်းကျန်းတတ်တဲ့ ဦးမိုးကြီးတို့အရပ်မှာ လေပွေတစ်ခုလာပြီဆို အဲဒီတွင်းလေးထဲကို ပြေးဝင်ပုန်းခိုကြရတယ်၊ ဒီအရပ်မှာတော့ အဆောက်အဦတွေကို ချေမှုန်းနိုင်တဲ့ အားပြင်းတဲ့ လေပွေကြီးကြီးတွေ လာတတ်ကြတယ်၊ လေပွေကြီးတစ်ခုလာရင် ကြမ်းပြင်အလယ်လောက်မှာရှိတဲ့ အဖုံးအကာလေးကိုလှပ်ပြီး လှေကားလေးအတိုင်း မှောင်မဲနေတဲ့ တွင်းလေးထဲ ခုန်ဆင်းပြေးပုန်းကြရတယ်တဲ့၊ ဦးမိုးကြီးက ရှင်းပြတယ်၊ ဦးမိုးကြီးပြောပြတော့ ခခ မျက်လုံးလေးပြူးဝိုင်းပြီးသာ နားထောင်နေခဲ့လေရဲ့၊ မုန်တိုင်းမသိ၊ လေပွေသိပ်မရှိတဲ့ အရပ်မှာ နေတဲ့သူဆိုတော့ ကြောက်ရလန့်ရကောင်းတယ်ရယ်လို့ရယ် ခခက မထင်မိပါဘူး။
တံခါးပေါက်နားမှာ ရပ်ပြီး အပြင်ဘက်ကို ခခ ငေးနေတယ်၊ ခခ ဘာကိုမှ မမြင်ပါဘူး၊ ဖြူပြာပြာမှုန်မှိုင်းမှိုင်း လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးက အရပ်လေးမျက်နှာမှာ တမျှော်တခေါ်ကြီးပဲ၊ ငေးလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး၊ ခခ က ဒါကိုလည်း သဘောတွေကျနေရှာတာပဲ၊ နေပြင်းပြင်းက ရွှေရောင်နီ လွင်ပြင်ဒေသက လယ်ယာတွေကို မွဲပြာရောင်ထနေအောင် မီးကင်ထားတယ်၊ လယ်ယာတွေမှာ အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေတောင် ပြည့်နေကြပြီ၊ မြက်ခင်းတွေလည်း မစိမ်းနိုင်ကြဘူး၊ ပြင်းတဲ့နေရောင်က မြက်ခင်းတွေရဲ့ ထိပ်ပိုင်းတွေကို မွဲပြာခြောက်သွေ့နေအောင် လောင်မြှိုက်ထားတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာ ဖြူပြာပြာအရောင်တွေပဲမြင်နေရတယ်၊ ဦးမိုးကြီးတို့ရဲ့သစ်လုံးအိမ်လေးကို တကြိမ်တော့ ဆေးသုတ်ခဲ့ကြသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း နေပြင်းကြီးက ဆေးသားတွေ ဖွာထွက်လာအောင် အပူနဲ့မြှိုက်တယ်၊ မိုးသားတွေက အဲဒီ ဆေးသားဖွာဖွာတွေကို ကွာကျကုန်အောင်ဆေးကြောပစ်ခဲ့ကြတယ်၊ အခုတော့ အိမ်လေးလည်း ဆေးသားပြောင်သလင်းခါလို့၊ လွင်ပြင်ကြီးရဲ့ မွဲပြာပြာအရောင်တွေ ကူးစက်လို့ပေါ့။
အန်တီနုနု ဒီနေရာကို စပြီးရောက်လာတုန်းက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်၊ ချောမောလှပတဲ့ ဇနီးလေးတစ်ယောက်ပါ၊ နေပြင်းနဲ့ လေပွေတွေက အန်တီနုနုကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြတယ်၊ နုနုမျက်လုံးတွေရဲ့ တလက်လက်တောက်ပခဲ့တဲ့ အရောင်တွေကို သိမ်းယူသွားပြီ မွဲပြာပြာအရောင်တွေပဲ ချန်ထားခဲ့တယ်၊ ပါးပြင်နဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေပေါ်က နီစွေးစွေးအရောင်တွေကိုလည်းယူသွားခဲ့ကြတာပါပဲ၊ သူတို့လည်း ဖြူလျော်ဖျော့တော့ကုန်ပြီ၊ နုနုက ပိန်သွယ်သွယ်ရယ်၊ အစားအစာဖောဖောသီသီစားရပုံမပေါ်ဘူး၊ ကျုံလှီလွန်းတယ်၊ ပြီးတော့ ရယ်လည်း မရယ်ဘူး၊ ခခ ရောက်လာတော့ ခခရဲ့ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတဲ့ဟန်ပန်လေးတွေက နုနုကို အံ့အားသင့်စေတယ်၊ ခခရဲ့ ရယ်မောသံလေးတွေက နုနုကို အလန့်လန့်အဖြတ်ဖြတ် ဖြစ်စေတယ်၊ ရယ်မောစရာတွေကို ဒီကလေးမလေး ဘယ်က ဘယ်လို ရှာဖွေတွေ့ရှိသလဲဆိုတာ နုနု အံ့သြနေပါတယ်။ ဦးမိုးကြီးလည်း မရယ်ပါဘူး၊ မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အလုပ်တွေကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ သူမသိဘူး၊ ဘယ်လိုရယ်မောရမယ် ဆိုတာတောင် မသိတော့ဘူး၊ မျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ စကားပြောခဲတယ်၊ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ စကားဆိုတယ်၊ ခခ နဲ့တွေ့တော့ သူတို့ မရယ်ပဲ မနေနိုင်ကြတော့ဘူး၊ ခခရဲ့ ခွေးလေး လဲ့ရာကလည်း သူတို့ရယ်မောလာအောင် ဆွဲဆောင်တယ်၊ လဲ့ရာက ဦးမိုးကြီး အိပ်ရာထဲလှဲနေပြီဆို မျက်နှာကို လျှာနီနီလေးနဲ့ လျှက်တယ်၊ ဦးမိုးကြီးလက်မောင်းကြားထဲတိုးဝင်ပြီး အိပ်တယ်၊ ဦးမိုးကြီး စကားမပြောလို့မရတော့ဘူး၊ မရယ်လို့လည်း မရတော့ဘူး၊ လဲ့ရာနဲ့ မဆော့ပဲ နေလို့မရတော့ဘူး၊ နုနုလည်းလိုက်ပြီးရယ်မောတယ်၊ ခခကလည်း ပျော်နေရှာတယ်၊ ဦးမိုးကြီးလယ်ထဲက အလုပ်တွေသိမ်းပြီးပြန်လာရင် သူတို့အားလုံး စကားတွေအလုအယက်ပြောပြီး လဲ့ရာနဲ့အတူ ဆော့ကစားကြတယ်။
ခခရောက်ပြီး ၃ရက်လောက်အကြာ ...
ဒီနေ့တော့ သူတို့ မဆော့နိုင်ကြဘူး၊ ဦးမိုးကြီးက တံခါးဝနားက လှေကားထစ်နိမ့်နိမ့်လေးတွေမှာ ထိုင်ပြီး ကောင်ကင်ကြီးကို စိုးရိမ်တကြီးကြည့်နေတယ်၊ ကောင်းကင်ကြီးက ခါတိုင်းနေ့တွေထက် ပိုပြီး မွဲညစ်ညစ်ကြီး၊ ခခလည်း လဲ့ရာကိုပွေ့ထားရင်း ဦးမိုးကြီးဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကောင်းကင်ကိုကြည့်တယ်၊ လဲ့ရာက နားရွက်လေး တဖက်စီကို ဟိုဒီ ရွှေ့ပြီး နားစွင့်တယ်၊ နုနုက ပန်းကန်တွေကို ဆေးကြောနေပါတယ်။
မြောက်ဘက်ဝေးဝေးဆီက လေပွေတစ်ခုရဲ့ တဟဲဟဲမြည်ဟီးသံကြီးပြေးလာနေတယ်၊ ဦးမိုးကြီးရော ခခပါ မြက်ပင်ရှည်တွေ လှိုင်းသဖွယ် လှုပ်ရှားနေကြတာကို မြင်နေကြရပြီ၊ အဲဒါ မုန်တိုင်းရဲ့ရှေ့ပြေးလှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုတွေ ..
တောင်ဘက်ပိုင်းက စူးရှတဲ့လေချွန်သံလို လေတွေက ရွှီးကနဲအော်မြည်လိုက်တယ်၊ တရွှီးရွှီးမြည်သံလာနေတဲ့ တောင်ပိုင်းက မြက်ပင်ရှည်တွေလည်း လှိုင်းဂယက်လိုတွန့်ခါနေကြပြီ။
ဦးမိုးကြီး ရုတ်တရက်ကြီး မတ်တပ်ရပ်တယ်၊ “မုန်တိုင်းလာနေပြီဟေ့၊ နုနုရေ” ဦးမိုးကြီးက နုနုကိုအော်ခေါ်ပါတယ်၊ “ခခ မြေတိုက်ခန်းထဲဝင်နေပါ၊ ဦးလေး နွားခြံဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်” ပြောလဲပြီးရော ဦးမိုးကြီး အိမ်လေးရဲ့ခေါင်မိုးအောက်ကနေ ပြေးထွက်သွားပါတယ်၊ နုနုက လုပ်လက်စအလုပ်တွေအားလုံးရပ်လိုက်ပြီး တံခါးဝဆီပြေးလာကြည့်တယ်၊ အကြည့်တချက်က အန္တရယ်နဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေပြီဆိုတာ နုနုကိုသိမြင်စေတယ်။
“ခခ မြန်မြန်လေး၊ လာ လာ” နုနုက ကျယ်လော်စူးရှစွာအော်ဟစ်ပါတယ်၊
“ပြေး မြေတိုက်ခန်းထဲကို မြန်မြန်လေးပြေးဟေ့”
လဲ့ရာက ခခလက်ထဲက ခုန်ချပြီး ဆင်းပြေးပါတယ်၊ အိပ်ရာထဲမှာသွားပြီးပုန်းနေတယ်၊ ခခ လဲ့ရာကို ပြန်ပြီးထွေးပွေ့ထားဖို့ အိပ်ရာဆီသွားတယ်၊ နုနုက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကြောက်ရွံ့နေပြီ၊ မြေတိုက်ခန်းဆီဆင်းတဲ့ တံခါးချပ်လေးကိုလှပ်ပြီး လှေကားကနေဆင်းတယ်၊ နောက်တော့ ခခ လဲ့ရာကို ဖမ်းမိသွားပါတယ်၊ နုနုအနောက်ကိုလိုက်ဖို့ ခခ ပြန်လှည့်တယ်၊ အိမ်ခန်းအလယ်လောက်အရောက်မှာ စူးရှတဲ့အသံပြင်းပြင်းနဲ့အတူ အိမ်ခန်းလေးသိမ့်သိမ့်တုန်သွားပါတယ်၊ ခါယမ်းနေတဲ့အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ ခခ ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လှမ်းလို့ မရတော့ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ရုတ်တရက်ထိုင်ချလိုက်ရတော့တယ်။
ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက် စတော့တာပဲ ..
အိမ်ခန်းလေးက နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက်လည်နေပြီးတော့ ... ဖြည်းဖြည်ချင်းပဲ လေထဲကိုမြောက်တက်သွားတော့တယ်၊ ခခ စိတ်ထင် အိမ်ခန်းလေးက လေဘောလုံးတစ်လုံးလိုပဲ၊ အပေါ်ဘက်ကို တလှုပ်လှုပ်နဲ့ရွေ့နေတယ်၊ အိမ်လေးဟာ မြောက်ဘက်က တိုက်တဲ့လေရယ်၊ တောင်ဘက်ကတိုက်တဲ့လေရယ် ဆုံမှတ်ကြားထဲရောက်နေရှာတယ်၊ ပြောရရင် ဆိုင်ကလုံးလေပွေကြီးရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာပေါ့၊ လေပွေကြီးရဲ့အလယ်မှာ လေက ညင်ညင်သာသာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အိမ်လေးရဲ့လေးဘက်လေးတန်မှာ လေဖိအားက သိပ်ပြင်းနေတယ်၊ အိမ်လေးက အပေါ်ကို မြောက်သထက် မြောက်တက်လာတယ်၊ ဆိုင်ကလုံးရဲ့အပေါ် ထိပ်ဆုံးထိကို ရောက်လာပြီ၊ ငှက်တောင်လေးတစ်ချောင်း အေးအေးသက်သာ သယ်ယူလာသလိုပဲ မိုင်ပေါင်းများစွာမြင့်တဲ့နေရာမှာ အိမ်ငယ်လေးရောက်နေပြီ၊ အိမ်ငယ်လေးရဲ့ အထဲမှာတော့ ခခနဲ့ လဲ့ရာတို့ အသက်ရှုဖို့ မေ့လျှော့သွားရလောက်အောင် ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။
သိပ်မှောင်တာပဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပဲ မွှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ သိပ်မဆိုးလှဘူး၊ ဖြည်းဖြည်းသက်သာလူးလိမ့်လည်ပတ်နေတာလောက်ပဲ၊ အကြိမ်နည်းနည်းလည်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တစ်ကြိမ်ကတော့ အိမ်လေးသွက်သွက်ခါ လိုက်သေးတယ်၊ ပြီးတော့ ပုခက်လေး လှုပ်ရမ်းနေသလောက်လေးပဲ လှုပ်နေတယ်၊ ခခ ကိုယ့်ဘာသာ ကလေးငယ်လေးပုခက်စီးသလိုတောင် ထင်နေမိခဲ့ပါတယ်၊ လဲ့ရာက မကြိုက်ဘူး၊ အိမ်လေးထဲမှာ ဟိုပြေးဒီပြေး၊ အခုဒီမှာ ခဏနေဟိုမှာ ပြေးလွှားနေတယ်၊ တ၀ုတ်ဝုတ် ဟောင်တယ်၊ ခခကတော့ ကြမ်းပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးပဲထိုင်ပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလည်း စောင့်နေခဲ့ပါတယ်၊ လည်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ ငါးရုပ်ဆွဲသီးလေးကို အသာအုပ်ကိုင်ပြီး ခခချစ်တဲ့ အဒေါ်နတ်သမီးလေးဆီ တိုင်တည်ပြီး ဆုတောင်းဘယ်၊ ဦးမိုးကြီးနဲ့ နုနုတို့ ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေ၊ လဲ့ရာလေးရော ပြီးတော့ ခခ၊ သူကိုယ်တိုင်အတွက်ရော ငြိမ်သက်ပြီး ဆုတောင်းပါတယ်။
ပြေးလွှားနေတဲ့ လဲ့ရာ မြေတိုက်ခန်းဆီဆင်းတဲ့ တံခါးချပ်လေးနားကိုရောက်သွားတယ်၊ အဲဒီတံခါးချပ်လေးက ပွင့်ထွက်လျှက်သား၊ အဲဒီအပေါက်လေးကနေ လဲ့ရာလွင့်ထွက်ကျသွားတော့တယ်၊ “လဲ့ရာ” ခခ လဲ့ရာကို ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ ထင်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်ပဲ ခခ တွေ့လိုက်ပါတယ်၊ လဲ့ရာရဲ့နားရွက်တဖက်က အပေါက်လေးတလျှောက်မှာ တခုခုနဲ့ ချိတ်မိနေသလိုမျိုး၊ ပြင်းလှတဲ့လေဖိအားက လဲ့ရာကိုတွန်းမြှောက်ထားလိုက်တယ်၊ လဲ့ရာ တံခါးချပ်လေးနားမှာ ရှိနေဆဲပဲ၊ ခခ တံခါးချပ်လေးဆီကို တွားပြီးသွားတယ်၊ လဲ့ရာရဲ့ နားရွက်လေးတစ်ဖက်ကိုပဲ အားပြုပြီး တရွတ်ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်၊ လဲ့ရာအိမ်ခန်းလေးထဲပြန်ပါလာပြီ၊ မြန်မြန်ပဲ တံခါးချပ်လေးကို ပိတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီနောက်တော့ ဘာမှ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထပ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ လေတွေငြိမ်နေတယ်။ အပြင်ဘက်မှာတော့ လေပွေတွေ တဝေါဝေါ ဝှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်နေဆဲပဲ။
နာရီတွေတစ်နာရီပြီး တစ်နာရီကျော်လွန်သွားတော့၊ ခခ လည်း ကြောက်စိတ်တွေပြေလျော့လာပြီ၊ တိုက်ခတ်နေကြတဲ့ လေပွေကြီးရဲ့ အသံက သိပ်ပြင်းထန်ပြီး ဆူညံလွန်းလို့ နားတွေမကြားရတော့လောက်အောင် ပျက်စီးကုန်ကြမှာပဲလို့ ခခ ကတွေးတယ်၊ ပထမတော့ မြေပြင်ကနေ မိုင်တွေအများကြီးပဲဝေးကွာပြီး မြောက်တက်နေတဲ့ ဟောဒီအိမ်ခန်းလေး မြေပေါ်ကိုပြန်ကျတဲ့အခါ အစိတ်စိတ်အမွှာမွာ ကွဲကြေသွားမှာပဲလို့ ထင်မိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ နာရီတွေအများကြီးကြာမြင့်လာတဲ့တိုင်အောင် ဘာမှကြောက်လန့်စရာဖြစ်မလာတဲ့အခါ ပူပင်တာရပ်သွားပြီ၊ စိတ်အေးအေးထားပြီး ဖြစ်လာတာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ ပဲ ပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့တယ်၊ ဘာတွေများဖြစ်လာမလဲ .. ရွဲ့စောင်းနေတဲ့ သူမရဲ့အိပ်ရာလေးဆီ ခခ တွားသွားလိုက်ပါတယ်၊ အိပ်ရာထဲမှာလှဲချလိုက်တယ်၊ လဲ့ရာလည်း ခခ ဘေးမှာ ကပ်ပြီးလှဲအိပ်တယ်၊ တအီအီအော်မြည်နေတဲ့အိမ်လေးထဲမှာ ခခ အိပ်မောကျသွားတော့တယ်။
“အု အီ .. အီ --------- အီ”
ကိုယ်လက်တွေနာကျင်မှုနဲ့ အတူ ခခ ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာပါတယ်၊ လဲ့ရာက သူ့ရဲ့နှာခေါင်း အေးစက်စက်လေးနဲ့ ခခမျက်နှာကို တို့ထိပြီး မအီမသာငြီးငြူနေတယ်၊ ခခ လှဲနေရာက ထပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်၊ အိမ်လေးက ရွေ့မနေတော့ဘူး၊ မှောင်မဲမနေတော့ဘူး၊ တောက်ပတဲ့နေရောင်ဟာ ပြတင်ပေါက်ကနေတိုးဝင်လာပြီး အခန်းလေးထဲ ဖြာကျနေတယ်၊ ခခ အိပ်ရာထဲက ခုန်ထလိုက်ပြီး တံခါးပေါက်ကိုပြေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်၊ အိုး .. အပြင်မှာ ..
ဆိုင်ကလုံးလေပွေက အိမ်ခန်းလေးကို မြေပြင်ပေါ် သာသာလေးပဲပြန်ချပေးသွားခဲ့တာပဲကိုး၊ ဆိုင်ကလုံးရဲ့ဗဟိုထဲ အိမ်လေးကို ဆွဲယူခဲ့ပြီး အခုတစ်ခါ သိပ်ကိုလှပတဲ့ကုန်းမြေလေးရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာချထားခဲ့ပြန်ပြီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေပါတယ်၊ သစ်ပင်တွေက သန်မာလှပြီး သစ်သီးတွေရဲ့ရနံ့က မွှေးအီနေတာပဲ၊ ပန်းတွေအဆုတ်လိုက် အခင်းလိုက် နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်၊ ငှက်လေးတွေက ရှားရှားပါးပါးအသွေးအရောင်ရှိနေကြပြီး ငှက်မွှေးငှက်တောင်လေးတွေ ပြောင်လက်တောက်ပလို့နေတယ်၊ ငှက်လေးတွေ တေးသီဆိုနေကြတယ်၊ သစ်ပင်တွေပေါ် ချုံပုတ်တွေပေါ် ဟို သည် တဖျပ်ဖျပ်ပျံသန်းနေကြပါတယ်၊ စမ်းချောင်းသေးသေးလေးကလည်း အနားမှာ ရှိနေသေးတယ်၊ ကမ်းပါးစိမ်းစိမ်းနှစ်ခုအလယ်မှာ စမ်ချောင်းလေးစီးနေပုံက တလက်လက်နဲ့ စမ်းချောင်းပြာပြာလေးထဲမှာ စိန်ပွင့်တွေ ရွေ့လျားနေလို၊ သိပ်လှတာပဲ၊ မွဲပြာပြာလွင်ပြင်လေးဆီက လာခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး ခခ က “သိပ်လှတာပဲ သိပ်လှတာပဲ” လို့ ထပ်ကာထပ်ကာရေရွတ်နေမိတော့တယ်။
ထူးဆန်းပြီး လှပလွန်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကို စိတ်ဝင်တစားငေးနေချိန်၊ ခခ သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်၊ ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့လူတစ်စု ခခ ဆီကို တရွေ့ရွေ့တိုးလာနေကြတယ်၊ သူတို့က ခခ မြင်ဖူးနေကျလူတွေလို ထွားကျိုင်းသန်မာမှု မရှိကြသလိုပဲ၊ သိပ်ပြီးသေးငယ်လွန်းနေတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး၊ ခခ အရပ်အမောင်းလောက်တော့ သူတို့ရှိကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သိသာလှတယ်၊ သူတို့က အသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးကို အိုမင်းနေပုံရတယ်လို့ ခခ စိတ်ထဲမှာပဲ စကားဆိုမိတယ်၊ အဲဒီလူတွေအားလုံး သစ်သီးခြမ်းခေါင်းဆောင်းရောင်စုံလေးတွေ ဆောင်းထားကြတယ်၊ ခေါင်းဆောင်းပြောင်ချောချောလေးတွေမှာ သစ်သီးအညှာတံလေးတွေလိုလည်း ပါသေးတယ်၊ အရှေ့ဘက်ကို ကွေးကောက်ကောက်လေးတွေ၊ သစ်သီးခြမ်းခေါင်းဆောင်းလေးတွေ အနားတလျှောက်မှာလည်း ခေါင်းလောင်းပုံလေးတွေလက်နေတာပဲ၊ သူတို့ ခေါင်းလေးတွေလှုပ်လိုက်တိုင်း ခေါင်းလောင်းလေးတွေက တချွင်ချွင်မြည်နေကြတယ်၊ သေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့ အမျိုးသားတွေက ခေါင်းဆောင်းအပြာရောင်တွေ ဆောင်းထားကြတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေက အစိမ်းရောင်လေးတွေ၊ အဲဒီအထဲ က တစ်ယောက်တည်းသော အဖြူရောင်အမျိုးသမီးက ရှေ့ကို ထွက်လာတယ်၊ အန်တီနုနုထက်တောင် အသက်ကြီးပုံပဲ၊ ဆံပင်တွေက အားလုံးလိုလို ဖြူနေကြပြီ၊ မျက်နှာမှာလည်း အရေးအကြောင်း တွန့်တွန့်တွေ တော်တော်များနေပြီ၊ နုနုမျက်နှာထက် ပိုပြီးတော့များလှပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ ချောမောလှပတယ်။
အမျိုးသမီးက ဦးညွှတ်အရိုအသေပေးပြီး ချိုသာတဲ့ အသံလေးနဲ့ ...
“မင်္ဂလာပါ မြင့်မြတ်လှတဲ့ မှော်ဆရာမလေးရယ် လူသူငယ်တိုင်းပြည်ကကြိုဆိုပါတယ်”
“ရိုင်းစိုင်းဆိုးညစ်တဲ့ အရှေ့အရပ်ကမိစ္ဆာစုန်းမကို သတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်၊ အခုဆို ငါတို့လူသူငယ်တွေ အားလုံး အရှေ့မိစ္ဆာမရဲ့ ကျိန်စာကနေလွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီကွဲ့” လို့ ဆိုတယ်။
ခခ အဲဒီအမျိုးသမီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါ ပိုပြီး အံ့သြရပြန်တယ်၊ ခခ ကို မှော်ဆရာမလေးလို့ ခေါ်တယ်၊ ခခ က အရှေ့မိစ္ဆာစုန်းမကို သတ်ဖြတ်လိုက်သတဲ့၊ ခခ ကဖြင့် ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ကလေးမလေး၊ ပရွက်ဆိတ်လေးတစ်ကောင်တောင် သတ်ဝံ့သူမှ မဟုတ်တာ၊ ဆိုင်ကလုံးကြီးက သယ်ယူလာလို့သာ ခခ ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ရတာပဲ။
ခခ တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ပဲ ပြောရတော့တယ်၊
“ရှင်က သိပ်ပြီးကြင်နာတတ်တာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုတော့ အလွဲကြီးလွဲနေပြီ၊ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသတ်ခဲ့ပါဘူး”
“မင်းရဲ့အိမ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ တကယ့်ကိုသတ်လိုက်ပါတယ်” အမျိုးသမီးကြီးက ရယ်မောရင်းဖြေတယ်၊
“တူတူပါပဲကွယ်၊ ဟောဟိုမှာ ကြည့်ပါဦး၊ မင်းရဲ့အိမ်လေးအောက်မှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတွေ့ရဲ့မဟုတ်လား၊ အဲဒါ အရှေ့မိစ္ဆာမရဲ့ ခြေထောက်တွေပေါ့၊ သူ မင်းရဲ့ အိမ်လေးအောက်မှာ ပြားကပ်နေပြီကွဲ့”
ခခ အိမ်လေးဆီလှမ်းကြည့်တယ်၊ တကယ်ပဲ အိမ်လေးရဲ့ ထောင့်အောက်မှာ ခြေချောင်းနှစ်ချောင်းခပ်စောင်းစောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်၊
လက်ဖ၀ါးနှစ်ဘက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ခခ တုပ်လှုပ်ခြောက်ခြားနေပါတယ်၊ စပြီး ငိုကြွေးတော့တယ်၊
“ဘုရားသခင်၊ အိမ်က သူ့အပေါ်ကို ပိကျသွားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ”
“ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့ပါဘူးကွယ်၊ ပြီးဆုံးသွားပြီပဲဟာ” အမျိုးသမီးကြီးက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ဖြေပါတယ်၊
“ဒါပေမဲ့ရှင် .. အဲဒါဘယ်သူပါလိမ့်” ခခ မယုံနိုင်သေးဘူး၊ ငိုရှိုက်ရင်းနဲ့ ထပ်ပြီး မေးပါတယ်၊
“သူက အရှေ့အရပ်မှာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သိပ်ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စုန်းမ၊ မိစ္ဆာမပေါ့၊ ငါ ပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေ၊ သူက လူသူငယ်တွေဖြစ်အောင်အားလုံးကို ကျိန်စာတိုက်ထားတာ၊ ကျေးကျွန်အဖြစ်သိမ်းထားးတယ်၊ သူ သေစေချင် သေပေးရတယ်၊ ရှင်ဆိုရင်တော့ ရှင်ခွင့်ရတာပေါ့၊ အခုဆို သူတို့အားလုံးအနှောင်အဖွဲ့က လွတ်လပ်ပြီ၊ သူတို့ နဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားကြတော့မယ်၊ ဒီနေ့တစ်နေ့ နေရောင်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နေ့ နေအလင်းရောင်ရတာနဲ့ သူတို့ မူလဘ၀ကို ပြန်ရကြမှာ၊ ကလေးမကို သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲကွယ်”
“လူသူငယ်တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ” ခခ မေးကြည့်တယ်၊
“အရှေ့အရပ်မှာနေတဲ့သူတွေပေါ့၊ မိစ္ဆာစုန်းမကြီးက အရှေ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်လေ”
“မဟုတ်ဘူးကွဲ့၊ ငါက မြောက်အရပ်ကလာတာ၊ ဟောဒီ မိစ္ဆာသေသေချင်း ငါ့ကို သူတို့သတင်းပို့ကြလို့ ချက်ချင်း ဒီနေရာကိုထွက်လာရတာ၊ ငါက သူတို့တွေရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပေါ့ကွယ်၊ ငါက မြောက်အရပ်က စုန်းမပေါ့”
“အိုး... လာပြန်ပြီရှင်.. စုန်းမတဲ့၊ ရှင်က သိပ်ကျက်သရေရှိတာပဲ၊ ရှင်က တကယ့်စုန်းမလား”
“အသေအချာပေါ့” အမျိုးသမီးက ဖြေပါတယ်၊
“ဒါပေမဲ့ ငါက ကောင်းတဲ့စုန်းမကွဲ့၊ လူတွေက ငါ့ကိုချစ်ကြတယ်၊ ဒီအရှေ့အရပ်မှာ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မိစ္ဆာစုန်းမလို ငါက အစွမ်းမထက်ပါဘူးကွယ်”
ခခ က တကယ့်စုန်းမဆိုတဲ့ အဖြူရောင်အမျိုးသမီးကို ကြောက်စိတ်ကတော့ ရှိနေတုန်းပဲ၊ ကြောက်စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ စပ်စုလိုစိတ်တစ်ဝက်နဲ့ စကားဆက်ပါတယ်၊ “ကျွန်မ သိထားတာကတော့ စုန်းမတိုင်း မိစ္ဆာလိုကြမ်းကြုတ်ရက်စက်ကြတာချည်းပါပဲ”
“အဲဒါ မဟာအမှားကြီးပဲ၊ တို့ရဲ့ ပဉ္စင်တိုင်းပြည်မှာ စုန်းမလေးဦးရှိတယ်၊ မြောက်အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်က စုန်းမတွေက ကောင်းတဲ့စုန်းမတွေပေါ့၊ အဲဒါအမှန်ပဲ၊ အဲဒီနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ငါပေါ့၊ မမှားနိုင်ပါဘူး၊ အရှေ့အရပ်နဲ့ အနောက်အရပ်မှာနေထိုင်တဲ့ စုန်းမတွေကတော့ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တယ်၊ ဆိုးတဲ့စုန်းမတွေပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အခု မင်းက ဆိုးတဲ့စုန်းမတစ်ကောင်ကို သတ်လိုက်ပြီ၊ အနောက်အရပ်က မိစ္ဆာတစ်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်”
“ဒါပေမဲ့” ခခ ခဏလောက်စဉ်းစားပြီး ထပ်မေးပါတယ်၊
“အန်တီနုနုကတော့ ပြောတာပဲ၊ စုန်းမတွေအားလုံး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအများကြီးထဲက သူတို့ သေသွားကြပြီတဲ့”
“အန်တီနုနုက ဘယ်သူလဲကွယ်” အမျိုးသမီးက စူးစမ်းပါတယ်၊
“ရွှေရောင်နီလွင်ပြင်မှာနေတဲ့ ကျွန်မ ဦးလေးရဲ့မိန်းမပေါ့”
အမျိုးသမီးကြီးက အတန်ကြာစဉ်းစားနေပါတယ်၊ “ရွှေရောင်နီလွင်ပြင် ... ငါ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါလားကွယ်၊ အဲဒါ လူသားတွေချည်းပဲနေတဲ့ တိုင်းပြည်များလားပဲ”
“အိုး .. ဟုတ်ကဲ့” ခခ စကားပြန်ပါတယ်၊
“လူသားတွေချည်းပဲ နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ စုန်းမတွေ၊ သတ္တ၀ါဆန်းတွေ၊ မှော်ဆရာတွေ၊ မျက်လှည့်ဆရာတွေ မကျန်ရစ်တော့ဘူးကွဲ့၊ ဒါပေမဲ့ တို့ရဲ့ ပဉ္စင်တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့နေရာဒေသလေ၊ အဲဒါကြောင့် စုန်းမတွေနဲ့ သတ္တ၀ါဆန်းတွေဆိုတာ ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာရှိနေဆဲပဲ”
ခခ နဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးတို့ စကားကောင်းနေကြတုန်းမှာပဲ အိမ်လေးအောက်မှာ ပိနေတဲ့ စုန်းမကြီးရဲ့ ခြေထောက်တွေ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်၊ “သူ က သိပ်အိုမင်းနေပြီလေ” အမျိးသမီးကြီးက ရှင်းပြတယ်၊
“နေရောင်က သူကို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခြောက်သွေ့ပြီး အငွေ့ပျံအောင်လုပ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်၊ အဲဒါ သူ့ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကလေးမ တွေ့လား သူ့ရဲ့ ငွေရောင်ရှုးဖိနပ်လေးကတော့ ဒီအတိုင်းရှိနေဆဲပဲ၊ ကလေးမနဲ့ ထိုက်လို့ ရတာပဲ၊ မင်း ငွေဖိနပ်လေး စမ်းပြီးစီးကြည့်သင့်တယ်ကွဲ့” အမျိုးသမီးက အိမ်လေးထောင့်နားမှာ ကျနေတဲ့ ငွေရောင်ရှုးဖိနပ်လေးကို ဖုံတွေခါပြီး ခခ ကိုပေးပါတယ်၊
လူသူငယ်လေးတစ်ယောက်က ခခ တို့ အနားကို မ၀ံမရဲတိုးကပ်လာပြီး “အဲဒီဖိနပ်လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာကို စုန်းမိစ္ဆာမက သိပ်ကို ဂုဏ်ယူတာ၊ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်၊ ဘာတွေဘယ်လိုစွမ်းသလည်းဆိုတာတော့ ငါတို့ တွေ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး” လို့ ၀င်ပြောပါတယ်။
ခခ လည်း ငွေရောင်ဖိနပ်ကို ကိုင်ပြီး အနားကကျောက်တုံးနားမှာထိုင်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ခခ ခြေထောက်လေးတွေဆီမှာ စွပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်၊ အံ့သြစရာ .. ငွေရောင်ဖိနပ်လေးက ခခ ခြေထောက်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ လှပနေတော့တယ်၊ လဲ့ရာကလည်း အနားကိုပြေးလာပြီး ခခရဲ့ ငွေရောင်ခြေဖမိုးလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အမြီးလေးယမ်းကာ တ၀ုတ်ဝုတ်ဟောင်တယ်၊ လဲ့ရာ သဘောကျနေပုံပဲ။
အမျိုးသမီးကပြောတယ်၊ “ငွေရောင်ရှုးဖိနပ်လေးက ငါတို့လက်ဆောင်ပေါ့၊ ပြီးတော့ ဒီဟာလေး ...” အမျိုးသမီးက ဖန်လက်ကောက်လေးတစ်ခုပေးပါတယ်၊ ဖန်သားအပြာရောင်လက်ကောက်လေးထဲမှာ ငါးရုပ်သေးသေးလေးတွေ ငါးကောင်ရှိတယ်၊ သိပ်ကိုလှတဲ့ လက်ကောက်လေးပဲ၊
ပြီးတော့ အမျိုးသမီးက ထပ်ပြောပါတယ်၊
“ကလေးမရဲ့ အဒေါ်က ငါတို့ မိတ်ဆွေပါပဲ”
“ရှင် .. ကျွန်မအဒေါ် .. ဘယ်လိုများ သိပါလိမ့်”
“ဒီမှာလေ .. မင်းရဲ့ ဆွဲကြိုးက ငါးရုပ်ဆွဲသီးလေးမြင်တာနဲ့ သိတာပေါ့၊ သူက ပင်လယ်ပြာနတ်သမီးကွဲ့”
ခခ တော်တော်ဝမ်းသာသွားပါတယ်၊ ခခ သိပ်ချစ်တဲ့ အဒေါ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတော့ .....၊ ဖိုးပလံနဲ့ မော်စီတို့ကို ခေါ်ပြီးပြလိုက်ချင်တာ၊ သူတို့ဆို သိပ်အံ့သြသွားမှာပဲ၊
“အခု ... ကျွန်မ ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်နုနုတို့ဆီ ပြန်သွားမှ ဖြစ်မယ်၊ သူတို့ သိပ်ကိုစိတ်ပူနေကြမှာပဲ“
“အို ..” ခခ အိမ်လေးကိုသတိရသွားပြီး မျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်၊
“နုနုတို့က သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ်၊ အခုဆိုရင် ရောင်နီလွင်ပြင်က နေရောင်အောက်မှာ သူတို့ ပူလောင်နေကြတော့မယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးက ဒီမှာပျက်စီးနေပြီ၊ ကျွန်မကို နုနုတို့ဆီ ပြန်ပို့ပေးနိုင်မလားရှင်”
“ကဲ ကွယ်၊ တိတ်ပါလေ၊ မငိုပါနဲ့ ကလေးရယ်၊ လူကောင်းတွေအတွက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ စောင့်ရှောက်မယ့်သူတွေ ရှိကြပါတယ်လေ” လို့ အမျိုးသမီးက ပြောတယ်။
ခခ ကတော့ ငိုပြီးရင်း ငိုနေမိတော့တယ်၊
“ကဲ .. ချစ်စရာမှော်ဆရာမလေး၊ ငါတို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်လေး၊ ပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်” အမျိုးသမီးက ပြောရင်းနဲ့ ခခ ခေါင်းလေးကို နှင်တံလေးနဲ့ တို့လိုက်ပါတယ်၊ ခခလည်း ကြောက်လန့်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်တယ်၊ ခခ ကိုယ်ကို လေညင်းလေးက ဖွဖွလေးတိုးဝှေ့နေပါတယ်၊ နောက်တော့ ခခ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။
“အမလေး... ခခ ... ၀မ်းသာလိုက်တာကွယ် -------လဲ့ရာလေး -------”
ဦးမိုးကြီးနဲ့ နုနုတို့ ခခ ဆီပြေးလာကြတယ်၊
အိုး နုနုတို့ရဲ့ အိမ်ခန်းလေးနေရာမှ အုတ်သားနဲ့အိမ်လှလှလေးတစ်လုံး၊ ခပ်သေးသေးပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အရင်က နုနုတို့ သစ်သားအိမ်လေးထက် ပိုပြီး လုံခြုံခိုင်ခံ့ပုံရတယ်၊ ချစ်စရာအ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့လေးရယ်၊ အ၀ါလဲ့လဲ့လေး အရောင်ပြေးနေတယ်ဆိုရုံလေးပဲ၊
နုနုက သိပ်ကိုအံ့သြနေတဲ့ မျက်နှာအိုလေးနဲ့ “ခခရေ .. ကြည့်ပါဦး ... ကြည့်ပါဦးကွဲ့ .. အိမ်လေးတစ်လုံး” လို့ စကားထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ဆိုရှာတယ်။
“ဒါ ငါတို့အိမ်တဲ့၊ သိပ်ထူးဆန်းတာပဲကွယ်၊ အိမ်လေးထဲမှာ ငါတို့ရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေရှိတယ်၊ အရင်အတိုင်း၊ သစ်လုံးအိမ်လေးထဲ ငါတို့ သိပ်ဆည်းထားကြသလို၊ အားလုံးတူတူပဲ၊ မတူတာတစ်ခုပဲ၊ ဟောဒီလို အုတ်သားဝါ၀ါအိမ်လေးဖြစ်နေတာပဲဟေ့” ဦးမိုးကြီးက အလောတကြီးဝင်ပြောပါတယ်။
ခခ က ၀မ်းသာလွန်းလို့ စကားမဆိုနိုင်ဘူး၊ နုနုတို့ကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်လေးတလည်လည်နဲ့ ပြုံးပဲပြုံးနေနိုင်တော့တယ်။
ခခလက်ထဲက လဲ့ရာ ရုန်းထွက်ပြီး ခုန်ဆင်းလိုက်တယ်၊ လဲ့ရာ အ၀ါလဲ့လဲ့အိမ်လေးဘေးမှာ လှည့်ပတ်ပြီး ပြေးတော့တယ်၊ ခခ က ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာပဲ လဲ့ရာနောက်ကို ပြေးပြီးလိုက်တယ်၊ ခခ ရဲ့ ငွေရောင်ရှုးဖိနပ်လေးက တလက်လက်နဲ့၊ သိပ်လှတာပဲ၊ ခခ ရဲ့ခြေတလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်း ဦးမိုးကြီးတို့ရဲ့ အရင်က မွဲပြာပြာမြေတွေမှာ စိမ်းစိမ်းစိုစိုမြက်ခင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်၊ လဲ့ရာလေးက ဦးမိုးကြီးလယ်ကွင်းတွေဘက်ကိုပါ ပြေးလွှားဆော့ကစားတယ်၊ ခခ လည်း လဲ့ရာနောက်ကို အပြေးလိုက်ပါတယ်၊ ဆိုင်ကလုံးလေပွေကြီး တိုက်ခတ်မွှေနှောက်သွားတဲ့နေရာဆိုတာ ဘယ်သူမှ ယုံနိုင်စရာမရှိအောင်ပဲ အရာအားလုံးက နေသားတကျ ရှိနေကြတယ်၊ အရင်ကထက် .. ပိုပြီးစိမ်းစိုလန်းဆန်းလို့၊ မြက်ခင်းတွေ၊ စပါးပင်တွေ၊ ပြောင်းပင်တွေဟာ အားလုံး ပြည့်ပြည့်၀၀ လှပလို့ နေကြတယ်၊ ခခရဲ့ ခြေလှမ်းနောက်မှာ မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်တဲ့ ပန်းရောင်စုံလေးတွေ ပွင့်ဖူးလာကြတယ်၊
ကြည့်ပါ... အခုဆို ... လှပစိမ်းစိုတဲ့ ရွှေရောင်နီလွင်ပြင်မှာ နုနုနဲ့ ဦးမိုးကြီးတို့ ပျော်ရွှင်စွာရယ်မောနေကြပါပြီ။
Ref: The Magic of Oz by L. Frank Baum
ပြန်တောင်ငယ်ချင်သွားပြီ ဒီလိုပုံပြင်လေးတွေ နားထောင်ချင်လို့လေ
နာနတ်သီးနဲ့ ရာသက်ပန်တူတူနေပြီး သားသားမီးမီးတွေနဲ့ ပျော်နိုင်ပါစေလို့
February 28, 2011 at 9:07 AM
၁. ရွှေရောင်သော့တစ်ချောင်းနဲ့ ဖွင့်ရတဲ့ကမ္ဘာ
၂. စုန်းဖြူ စုန်းမဲ တစ်ကောင်ထဲ
အီဂျစ်ရဲ့ ယနေ့စဖင့်ရုပ်ကြီးများ
ဘလော့ဂ်တွေမှာ ကပ်တဲ့ MALWARE - Red Alert
Sade Live - Smooth Operator
Bertie Higgins - "Casablanca" Tour Promo
၄. ကဲ ... ယုံပြီလား
I've Never Been To Me (Original Music Video) Charl...
♫ ဘာတွေများလိုအပ်လို့လည်း ♫ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရတာ ♫
၅. မေမေ့ မွေးနေ့အတွက် ပန်းလက်ဆောင် ( အပိုင်း ၁ )